उत्कृष्ट तीनमा नेपाली मूलकी प्रतिष्ठा - आजकी नारी - नारी
उत्कृष्ट तीनमा नेपाली मूलकी प्रतिष्ठा
नेपाली मूलकी प्रतिष्ठा राउत यही साता बेलायतमा सम्पन्न सौन्दर्य प्रतियोगितामा सेकेन्ड रनरअप भएकी छिन् । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा भिडियो पोष्ट गर्दै आफु ‘मिस इङ्ल्याण्ड–२०१९’को उत्कष्ट तीनमा पुगेको जानकारी दिएकी हुन् ।
२० हजार आवेदनबाट उनी फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएकी हुन् । सेमिफाइनलमा इको ड्रेस राउण्ड, लिटल ब्ल्याक ड्रेस राउण्ड र ब्यूटी विथ पर्पोज गरी तीन राउण्ड भएको थियो । उनले च्यारिटीका लागि सबैभन्दा धेरै राशी संकलन गरेकी थिइन् । मानसिक जागरुकता फैलाउने क्षेत्रमा काम गरिरहेको क्रोनिकल सनसाइन फन्डका लागि प्रतिष्ठाले ९ हजार ९ सय ९९ पाउन्ड (१३ लाख रुपैयाँ बढी) संकलन गर्न सफल भएकी छिन् । यसका लागि उनलाई च्यारिटी क्विनको उपाधि दिइएको छ ।
२६ वर्षीया प्रतिष्ठा हङकङमा जन्मिएकी हुन् । ५ बर्षको उमेरदेखि परिवारसँग बेलायतमा बस्दै आएकी छन् । उनको बुवा बेलायती गोर्खा सैनिक हुन् । १६ बर्षको उमेरदेखि नै मोडलिङमा लागेकी प्रतिष्ठा पेशाले आर्किटेक हुन् ।
मिस इङ्ल्याण्डको ताज भने भारतीय मूलकी भाषा मुखर्जीले जितेकी हुन् । मिस इंग्ल्यान्ड विजेताले टाइटिलसहित २५ हजार पाउन्ड पुरस्कार, मिस वल्र्डमा सहभागिता र विभिन्न च्यारिटी कार्यमा आबद्ध हुन मौका पाउनेछन् ।
पुस ९, २०७७ - मिस युनिभर्स नेपालका लागि उत्कृष्ट १८ छनोट
चैत्र २, २०७६ - आफैं सचेत र जागरूक हुनुपर्छ
चैत्र २, २०७६ - अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली चेलीको सफलता
फाल्गुन ७, २०७६ - मिस ईग्ल्याण्डमा सफल भएकी नेपाली छोरी
पुस २२, २०७६ - सिड्नीको काल्टर्नमा नेपाली युवाले सुरु गरे ‘मायालु मिनी मार्केट’
पुस २०, २०७६ - नेपाली उत्पादनको माग बढ्दो
थप केही आजकी नारीबाट
ब्रान्ड स्थापनामा छेची पुस ८, २०७७
श्रुतिलाई दुई स्वर्ण पुस ५, २०७७
नवनियुक्त डिन डा. दिव्याः चाहना कार्डियोलोजिस्ट, काम नेफ्रोलोजीस्ट असार ४, २०७७
युएन वुमनको टप फाइभमा डा. रुना वैशाख २०, २०७७
टेनिसमा उपाधि विजेता प्रेरणा चैत्र ३, २०७६
अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली चेलीको सफलता चैत्र २, २०७६